Mandiniha ny haavon'ny teny Anglisy - Sekolin'ny Fiteny Afovoany, Cambridge
Alohan'ny ahafahantsika manapa-kevitra hoe inona ny fianarana na ny fanadinana tokony ho raisinareo, dia mila mahafantatra ny halehiben'ny teny anglisy misy anao. Ity misy rohy mankany amin'ny tranonkala Cambridge Assessment, izay ahafahanao mandray ny fitsapana anglisy amin'ny teny Anglisy.
Mba hizaha ny Anglisy, tsindrio eto.
Ny valiny dia milaza aminao ny halehibiazanao, ary inona no fanadinana azonao atao. Jereo ny 'Courses We Offer'pejy, na, raha te hijery fanadinana ianao dia jereo ny'fanadinana'pejy.
Ny lanjanao dia voamarina amin'ny ambaran'ny A1, A2, B1, B2, C1, na C2 (avo indrindra).
Ny vokatra atolotr'ireo fitsapana fohy dia taridalana tsy azo ihodivirana, ka manandramantsika ny fari-pitsipika anananareo rehefa tonga ianareo, alohan'ny hampianarantsika anareo ary hamariparitra anareo rehefa mandroso ianareo.